Southwest Airlines: Waxaan diidi doonaa mamnuucidda Texas ee waajibka tallaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Southwest Airlines: Waxaan diidi doonaa mamnuucidda Texas ee waajibka tallaalka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Maamulaha Koonfur Galbeed: Waxaan ka hor imaan doonaa mamnuucidda Texas ee waajibaadka tallaalka
Gary Kelly: “Waxaan ku boorineynaa dhammaan shaqaalahayaga inay is tallaalaan. Haddii aysan awoodin, waxaan ku boorineynaa inay raadsadaan hoy, ama arrimo caafimaad ama diimeed. ”
Waajibaadka tallaalka COVID-19 ee Southwest Airlines wuxuu lahaa xiriir “eber” oo ku saabsan baajinta duulimaadyada dhammaadka wiigga.
Ujeeddada waajibka tallaalka Southwest Airlines waa in la hagaajiyo caafimaadka iyo badbaadada, ee ma aha in dadku shaqadooda waayaan.
Diyaaradda Southwest Airlines waxay xarunteedu tahay Dallas, Teksas waxaana laga yaabaa inay la kulanto jawaab adag oo ah inay ka hor timid amarka fulinta ee gobolka.
Maamulaha guud ee Southwest Airlines Gary Kelly, ayaa maanta wacad ku maray inuu ka hor imaan doono mamnuucidda Texas ee waajibaadka tallaalka COVID-19.
Amarka cusub ee Guddoomiyaha Gobolka Texas Greg Abbott ayaa ka mamnuucaya shirkadaha gaarka loo leeyahay inay u baahdaan tallaalka COVID-19 shaqaalaha.
Intii lagu guda jiray wareysiga Talaadadii, Kelly wuxuu ku adkeystay taas Southwest Airlines Waajibaadka tallaalka COVID-19 wuxuu xiriir la lahaa “eber” kumanaan duulimaad oo la baajiyay dhammaadkii usbuuca iyo dacwad urur oo ka dhan ah shirkadda, iyo in shirkaddu aysan “wax arrin ah” ku lahayn shaqaalaheeda.
“Waxaan ku boorineynaa dhammaan shaqaalahayaga inay is tallaalaan. Haddii aysan awoodin, waxaan ku boorineynaa inay raadsadaan hoy, ha ahaato arrimo caafimaad ama diimeed, laakiin hadafkaygu sida iska cad ayaa ah inaan qofna shaqadiisa lumin, ”ayuu yiri Kelly, isagoo sharraxaya in ujeeddada tallaalka Southwest Airlines ay tahay "Si loo wanaajiyo caafimaadka iyo badbaadada, maahan in dadku ay waayaan shaqooyinkooda."
“Haa, waxaan ka qabnaa aragtiyo aad u xoog badan mawduucaas, laakiin taasi maahan waxa la isku haystay Southwest Airlines dhammaadka usbuuca, ”ayuu sii raaciyay, isaga oo tixraacaya baajinta duulimaadyada iyo dib -u -dhaca. Taa bedelkeeda, maamulaha guud wuxuu umuuqdaa inuu labanlaabay eedaynta shaqaalaha hagista taraafikada hawada iyo cimilada Florida, wuxuuna si aan toos ahayn ugu tilmaamay "maqnaansho" mid ka mid ah arrimaha ay kormeeraan.
Kelly ayaa sidoo kale sheegay Talaadadii inuusan "waligiis raalli ka ahayn shirkadaha soo rogaya" waajibaadka tallaalka, laakiin wuxuu ku andacooday "amarka fulinta ee Madaxweyne Biden wuxuu farayaa in dhammaan shaqaalaha federaalka" iyo "dhammaan qandaraaslayaasha federaalka" - taas oo, fikradiisa, dhammaan shirkadaha waaweyn ” - waa inay hirgeliyaan tallaalka khasabka ah ugu dambayn 8 -da December.
Iyagoo wacad ku maray inay sii wadi doonaan waajibaadkooda tallaalka, si kastaba ha ahaatee, Southwest Airlines waxay umuuqataa inay ka hor imaanayso amar fulineed oo ay soo saartay Gudoomiyaha Gobolka Texas Greg Abbott Isniintii taas oo ka mamnuucaysa shirkadaha gaarka loo leeyahay inay u baahdaan tallaalka COVID-19 shaqaalaha.
Southwest Airlines saldhigeedu yahay Dallas, Texas, sidaa darteed waxay wajihi kartaa jawaab adag oo ka dhan ah amarka fulinta gobolka.